#Haddii aan Sacuudiga iyo Imaaraadka ku aaminno ammaankeenna Adigoo Tuug Aamina ayey la mid tahay - Get Latest News From Horn of Africa
#Haddii aan Sacuudiga iyo Imaaraadka ku aaminno ammaankeenna Adigoo Tuug Aamina ayey la mid tahay
Gabadha Ilhaan Cumar ee ka tirsan aqalka Koongareeska Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa khudbad ay dhawaan ka jeedisay golaha ku sheegtay arrimo xasaasi ah oo ku saabsan maamullada boqortooyooyinka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Ilhaan Cumar ayaa khudbadeeda ku xustay eedeymo waaweyn oo ka dhan ah labada dowladood, iyadoo ku tilmaantay inay si toos ah u taageeraan kooxaha loogu yeero argagixisada.
Ilhaan cumar oo hadalkeeda sii wadata ayey xustay arrin kale oo lama filaan ku noqotay dad badan, taasoo qeyb ka ah eedeynteeda.
“Waxaa kale oo aan aaminsanahay in dowladahan Sacuudiga iyo Imaaraadku ay maal galiyaan kooxaha argagixisada, waxaanna maqalnay inay hubka Mareykanka u sii gudbiyaan kooxda Al-Qaacida”.
Sikastaba ha ahaatee dhawaaqa kasoo yeeray Ilhaan ayaa kusoo beegmaya waqti uu Mareykanku hub balaayiin doolar ah ka iibiyay Sacuudi Carabiya.
Sidoo kale dhawaan ayay ahayd markii ay Ilhaan Cumar Sacuudiga iyo Imaaraadka ku eedeysay inay mas’uul ka yihiin xaaladda ka jirta dalka Yemen.
Weerarro la soo qaban qaabiyay ayaa looga soo qaaday dalalka kala ah Sacuudi Carabiya iyo dalka ay xulafada yihiin ee Imaaraadka Carabta, waxayna la sheegay in dalalka Khaliijka ay wadeen ol’ole ka dhan ah siyaasiyadda Soomaali-Mareykanka ah.
Hay’adaha Warbaahinta ee la dhacsan hannaanka maamulka dowladaha Khaliijka ayaa marar badan ku cel celiyay eedeymo ay u jeedinayeen Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib, iyagoo sheegayay iney labadaas gabdhood ee hadda ka tirsan Koongareska si toos ah u taageeraan ururka Ikhwaanul muslimiin ee laga mamnuucay dalka Masar, islamarkaana cadow la ah Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.